के बिल्कुल पाइपलाइन पोख्त नगर्ने ती समेत चिनिने मिक्सर छ। अन्य सबै सेनेटरी वस्तुहरू जस्तै यो तल, जो कुनै पनि दल कम्तिमा नयाँ संग निकास मिक्सर प्रतिस्थापन गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हो, समय बाहिर लगाउने विच्छेद गर्न Rot टाढा।
एक नल छनौट
एकाइ चयन गर्दा विशेष सुविधाहरू ध्यान। यो धातु मोटाइ छ र यो उत्पादन को सेवा जीवन निर्धारण किनभने, गुणस्तर नल सजिलो हुँदैन - सबै को पहिलो, आफ्नो हात मा ले। तुरुन्तै निर्माण सामाग्री साधारण silumin वा पीतल प्रतिनिधित्व गर्दछ। पीतल बनेको उत्पादन प्रभावशाली उपस्थिति र जंग विरुद्ध सुरक्षा को एक उच्च डिग्री छन्। यो कम गुणस्तर silumin भाइहरू संग तुलना, उच्च मूल्य भएको छ। बाथरूम मा नल स्थापना वा भान्सा मा गुणस्तर अर्को केही वर्ष यहाँ बचत गर्न सिफारिस गरिएको छैन त्यसैले, कम से कम राम्रो काम मिसिन आवश्यक छ।
Mixers को मोडेल, तर निम्न प्रकार आजकल व्यावसायिक उपलब्ध लागि जाँदा:
एकल लीवर - क्लासिक एकल लीवर। माथि-तल आन्दोलनहरु - पानी तापमान बायाँ र दायाँ आन्दोलनहरु, दबाव नियन्त्रित छ।
Dvuhventilny - चिसो र तातो पानी को लागि - दुई वाल्व संग शास्त्रीय मिक्सर।
सम्पर्क - नाम implies रूपमा, पानी सक्षम, यन्त्र संग सम्पर्क आवश्यकता छैन। यसको कार्यहरू हृदय मा ट्याप गर्न हात को दृष्टिकोण लगािन्छ एउटा इन्फ्रारेड सेन्सर छ। मिक्सर यस प्रकारको स्थापना मात्र हात धुने basins लागि प्रयोग गरिन्छ।
स्क्रिन, एक विशेष प्यानल प्रबन्ध जुन स्पर्श कुञ्जीहरूको हालतमा नियन्त्रित छ जो छुनुहोस्।
नयाँ मिक्सर स्थापना स्वाभाविक पुरानो उपकरण निराकरण द्वारा preceded छ। यो पानी काटेर गर्न आवश्यक छ र त्यसपछि ध्यानपूर्वक पुरानो मिक्सर unscrewing, पर्खाल मा सुहाउँछ मा सूत्रहरू बिगार्न छैन। यो उपयुक्त राम्ररी पुरानो पूर्व-रोल र मलबे को remnants देखि साफ छ।
अर्को सीधा सेटअप मिक्सर सुरु हुन्छ। मास्टिक Eccentric छ, पर्खाल मा फिटिंग मा स्क्रूड छन्। एक स्तर प्रयोग गरेर Screwing तथापि, आदानों बीच सबै नै दूरी भङ्ग हुनेछ भने, यूनियन आवश्यक 150 मिमी प्राप्त गर्न मदत।
अर्को, तपाईं Eccentric गर्न मिक्सर को मुख्य एकाइ प्रयास गर्न आवश्यक, यो हावा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। दुवै पक्ष बिना समस्या, क्याम्स सही तरिकाले सेट पल्टिने भने - तपाईं ब्लक हटाउन र सजावटी छत स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले कस पर्खाल आसन्न हो भने, यो मिक्सर को स्थापना दायाँ गरिन्छ अर्को संकेत हो।
यो एकाइ कस मात्र रहनेछ। यस मामला मा कुनै पनि सामाग्री छैन जरूरी clamping नट पर्याप्त छ भित्र, मानक gaskets प्रयोग गर्न छ Podmotochny। Sami पागल कस गर्दा एक सानो चीची गर्नु छ। मिश्रक स्थापना अब पूर्ण छ। तपाईं पानी आपूर्ति पुन-सक्षम पार्न सक्नुहुन्छ र उपकरण परीक्षण।
रूपमा आफ्नै हातले हेर्नुहोस् गर्न सक्नुहुन्छ मिक्सर को स्थापना - प्रत्येक को शक्ति कुनै पनि सहयोग बिना बाहिर भएको एक प्रक्रिया। आफ्नो काम मा सफलता!
Plastered काठ तल्ला: चयन गर्न के? आत्म-खानपान पकाउने प्रविधि
तपाईं एक्रिलिक स्नान सफा? सुझाव र चाल
झिल्ली superdiffuzionnaya "TechnoNikol": संरचना, गुण, प्रकार
चीन - वू
के फरक बच्चा mesadenitis छ?
वेबसाइट निगरानी: साइटको सञ्चालन नियन्त्रण
Scorpio - बच्चा, महिला, मानिस को लागि राशिफल
लाभ सख्त। चिसो पानी घनघोर। स्वास्थ्य पदोन्नति
बुनाई: नयाँ वर्ष को लागि काँटाले बुन्नु snowflakes
दलिया र किसमिस संग कद्दू कुकीहरू खाना पकाउने
नोकिया 5200 मोबाइल फोन को समीक्षा
"नेपोलियन" को लागि क्रीम कस्टर्ड